Yechokwadi-Nguva Kuburitsa uye Kutsvaga | Martech Zone
China, Kurume 4, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Real-time… Chave kuve chakakosha chinhu. Webtrends yakaburitsa chaiyo-nguva yekutsvaga pamwe chete neyekuzivisa. PubSubhubbub iri kubuda yemablog kuti asundidzire avo mafidha pane kuti vadzoswe. Yekutsvaga yekuita nguva iri kudzikira ... vanhu vari kutarisira mhinduro kumibvunzo yakangobvunzwa maminetsi mashoma apfuura.
Kune vaparidzi, chinetso ndechekuita kana nhau dzikaitika uye wozoshandisa pazviri nekukasira. Kana iwe uri muindastiri indasitiri uye zvitsva zvichiitika, iwe unofanirwa kushambadzira nekukurumidza sezvazvinogona. Hakusi kungofarirwa kuri kutyaira traffic, zvakare kugona kwako kuita.
Mazuva mashoma apfuura, ini ndakaburitsa WordPress Plugin yeChaCha. Iyo plugin mubatanidzwa wekuyedza zvimwe zvinhu zveChaCha yakakura netiweki yemibvunzo - ikozvino inowanika kuburikidza neAPI, maficha epamusoro, uye tsika feeds. Iyo plugin ine mashoma epadivi widgets - imwe iyo inobvumidza chaiyo-nguva kubvunza mibvunzo uye kuwana mhinduro kumashure…. zvakanaka.
Kune varidzi veblogiti, ini zvakare ndakasanganisira ChaCha Trends dashibhodhi iyo inopa mabloggi ane muongororwo wedatha inoteedzera paChaCha, Twitter neGoogle! Nekucherechedza ruzivo rwekufambisa, iwe unogona kukwidzirisa pamugwagwa wenyaya idzo vanhu vari kubvunza nezvadzo, kutsvaga, kana kukurukura.
Ndokumbira undizivise zvaunofunga! Ingo enda kune yako dhairekitori dhairekitori, Wedzera Nyowani, uye tsvaga ChaCha. Dzvanya gadza uye ichaisa iyo plugin. Kuti ushandise iyo yepadivi majeti, kunyoresa kune anovandudza kupinda kubva kuChaCha uye iwe unenge uchisimuka uchimhanya pasina nguva! Kana iwe uchingoda kumhanyisa iyo dashboard, ingo nyora chero chinhu mu API Munda wakakosha.
Iko kune ruzha ruzha kubva kupop tsika kune ese masosi, asi iwe unowana gem nguva imwe neimwe mune imwe nguva kuti uwane mari pairi. Kushandisa chaiyo-nguva mazwi mune zvako zvemukati uye kutsikisa zvirimo nekukurumidza kunogona kupa yako blog ine yakati wandei isingatarisirwe traffic!
kuburitsa: ChaCha mutengi.